ဖြစ်ကောင်းအများဆုံးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခု, အိုက်စလန်သည်ယင်း၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောရွက်လွှင့်မှုများကိုဂုဏ်ယူသည်, အဆုံးမဲ့မြအစိမ်းရောင်ရှုခင်းများ, ဆီးနှင်းဖြူသောတောင်ပေါ်ထိပ်, နှင့်အံ့မခန်းရေတံခွန်များ. Oh, ရဲ့ယင်း၏အလွန်ကြီးမားသောရေခဲမြစ်မေ့လျော့တော်မပါစေ, ရေပူစမ်း နှင့်ရေပူစမ်း, အဆိုပါ friendliest နှင့်အချို့, ကမ်ဘာပျေါတှငျကလူ! သို့သျောလညျး, ကံမကောင်းသဖြင့်, ဒီစကင်ဒီနေးတိုင်းပြည်သည်၎င်း၏ခန့်မှန်းရခက်ခြင်းနှင့်လည်ချောင်းနာရာသီဥတုကအဘို့နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားဖြစ်ပါသည်. အိုက်စလန်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ရှိပါတယ် 320 ထူသောမီးခိုးရောင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး၏ရက်ပေါင်း, 215 မိုးရွာရက်ပေါင်း, နှင်းမုန်တိုင်း, နှင့် Blizzard. ဒါဟာနေသာ vacay ခံစားရန်ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့မဟုတ်ပါဘူး.
#britian	#အေးအေးဆေးဆေး	#ဂရိ	#ပူ	#ချစ်တယ်	#အိုက်စလန်	#ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း	#ရာသီဥတု	ခရီးသွားပေါ်တူဂီ	travelspain